शनिवार, कार्तिक ६, २०७८ ०२:०६:१४ युनिकोड
बिहिवार, भदौ ३१, २०७८ सत्यकलम संवाददाता
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माधवकुमार नेपाल घरमा आगो लगाएर खरानी घसेर तीर्थयात्रामा निस्किएको टिप्पणी गरेका छन्।
काठमाडौं जिल्लास्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो भनेका हुन्। ‘माधव नेपालले घरमा आगो लगाए, निधारमा खरानी घसे अनि तीर्थयात्रामा निस्किएका छन्,’ ओलीले भने।
ओलीले देश, जनता र लाखौँ कार्यकर्ताको भविष्यमाथि माधव नेपालले खेलवाड गरेको आरोप लगाए। ‘माधव नेपालले १५ वर्ष पार्टी चलाए, प्रधानमन्त्री बने, अब त जानुपर्ने त कहीँ छैन’, उनले भने, ‘तर, आफ्नो इगोका कारण देश, जनता र कार्यकर्ताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न मिल्छ?’
माधव नेपालले झुक्याएको र झुक्किएका कार्यकर्तालाई एमालेमा फर्कन उनले आह्वान गरे। प्रचण्डसँग गएका कार्यकर्तालाई पनि उनले एमालेमा फर्कन आग्रह गरे।
उनले माधव नेपालसँग दुई–चार जना पुराना मान्छे गए पनि पार्टीमा धेरै नयाँ मान्छे सामेल भएको बताए । ‘माधव नेपालसँग दुई–चार जना पुराना मान्छे गए होलान । तर, नयाँ मान्छे कति हो कति एमालेमा सामेल भएका छन्,’ उनले भने ।
अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालको पार्टीलाई झिंगाको संज्ञा पनि दिए । ‘माहुरीको पछि लागेर गएपछि फूलबारीमा पुगिन्छ । एमाले भनेको माहुरी हो,’ उनले भने, ‘झिंगाका पछि लागेपछि फोहोरको डंगुरमा पुगिन्छ । रोग फैलाउनेका पछाडि लाग्नु हुँदैन । भ्रममा नपरेर पार्टीमा फर्किनुस् ।’
माओवादीका साथीहरु एमाले छाड्न नमानेको तर प्रचण्ड गुट लिएर गएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘नेकपा माओवादी केन्द्रका एकीकृत साथीहरूको ठूलै हिस्स थियो। प्रचण्डसँगै जान मानेनन्, प्रचण्ड गुटसँग जान मानेनन् । पार्टीमै रह्यो, एकीकृत पार्टीमा यहीँ हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईहरू पार्टीको कार्यकर्ता हो कि, प्रचण्डको घरेलु कार्यकर्ता हो, माओवादी केन्द्रको नाममा रहेका साथीलाई एमालेमा फर्कन म आह्वान गर्छु।’
कम्युनिस्टको सरकार ढालेर कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनाएको प्रति आक्रोश पोख्दै ओलीले भने, ‘मैले केही मन्त्री दिएको थिएँ नि, अहिले हेर्नु त देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई खोइ मन्त्री दिएको? प्रचण्डको पछि लागेर के हुन्छ। आउनुस् एकीकृत एमालेमा।’
ओलीले जनतालाई उत्तेजित बनाउने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनले जनतामाथि सत्ताको दुरूपयोग गरेर बल प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए।
‘जनतमाथि सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेर बल प्रयोग गरेको छ’, ओलीले भने, ‘जनतालाई उत्तेजित बनाउने कार्य नगर्नुस्, प्रतिकारमा उत्रने अवस्था नआओस्।’
आफ्नो शासनकालमा जनतामाथि बल प्रयोग नभएको दाबी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले अहिले सरकारले जनताको विरोध प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरेको आरोप लगाए।
विकासको लहर ल्याइरहेको सरकारलाई माधव नेपाल नेतृत्वले ढलाएको भन्दै ओलीले पहिलेको भन्दा ठूलो सफलता हासिल गर्ने दाबीसमेत गरे ।
माधव नेपालले सरकार ढालेको बताउँदै उनले भने, ‘माधव नेपालजीले नेतृत्व गरेर, नेकपा एमालेका विरुद्ध हमला गरेर यो स्थिति ल्याएको हो । आज देशमा निकम्मा सरकार जुन छ, एउटा विकासको लहर ल्याएर गति हाँकिरहेको सरकारलाई ढाल्ने काम माधव नेपालजीको नेतृत्वमा भयो,’ उनले भने, ‘आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर प्रमुख प्रतिपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बनाइएको छ । योभन्दा लज्जाजनक, अनुशासनहीन र अराजकता के हुन्छ ? राजनीतिमा योभन्दा ठूलो अनैतिकता र अराजकता के हुन्छ ? यो भन्दा ठूलो अपराध के हुन्छ ?’
आफूहरूसँग पार्टी र जनता रहेको बताउँदै ओलीले अघि भने, ‘तर, जबसम्म हामीसँग पार्टी छ । सबकुछ छ, सबथोक छ, तर हामीसँग जस्ताको तस्तै पार्टी छ । अझै उत्साहका साथ तपाईंहरू अघि बढ्नुभएको छ । यस्ता सरकार हामी फेरि बनाउँछौं । हामीले जनताबाट हारेका होइन । अदालतमा मुद्धा, यो त परमादेशबाट आएको सरकार न हो । जनताको बीचमा जाँदा जनताको मत के हुन्छ हामी देखिहाल्छौं ।’
प्रकाशित मिति: बिहिवार, भदौ ३१, २०७८, ०६:३८:००